Amanqaku kaChris Lucas Martech Zone |
Amanqaku ngu UChris Lucas
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Iminyaka emibini edlulileyo izise utshintsho oluninzi kwintengiso. Sibonile intshukumo enkulu isiya kwiselfowuni, idrive entsha yomxholo onamandla kunye nomtshato phakathi kwentlalo kunye nezorhwebo. Kodwa olona tshintsho lwenyikima lube kwindawo ye-SEO. Ngo-2013, uJohn Mueller wabhengeza ukuba uGoogle akasayi kuphinda ahlaziye i-PageRank (i-Toolbar PageRank), inkqubo yayo yokubeka amanqaku kwiwebhu ngokwexabiso. Kwaye khange. Endaweni yoko, sinesherifu entsha
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Nantsi into ye-CIO yangaphakathi kunye namaqela akho obuchwephesha angaphakathi angafuni ukuba uyazi, ukuphunyezwa kwesoftware yeenyanga ezili-18 ekubiza nje i- $ 500K- $ 1MM kunokwenziwa isihogo esinexabiso eliphantsi… kwaye kufanele ukuba kunjalo. Bakha ukhuseleko lomsebenzi kuba uninzi lweenkokheli ze-C kunye nabathengisi abayiqondi indlela itekhnoloji enokuthi isebenze ngayo. Njengabathengisi sonke sifuna isoftware elingana ne-unicorn. Lowo ukhokelela kwisizukulwana, ukudala umxholo, ukukhokela amanqaku,
NgoLwesithathu, uDisemba 2, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UChris Lucas
Ixesha lokuFunda: <1 mzuzu Akukho luvo luye lwaba yingubo yokhuselo iinkampani nabantu abazisebenzisileyo njengezikhuselo nanini na kuvela iindaba ezimbi okanye uhlolo loluntu. Kwilizwe elidala apho amajelo eendaba athatha ukukhutshwa kweendaba njengeendaba ezilungileyo kwaye apho iinkampani zikwazileyo ukulawula umyalezo Akukho luvo lusebenzela ukuthenga inkampani ixesha elithile. Namhlanje, akukho luvo alusebenzi. Buza iTiger Woods. Izixhobo ezikwimithombo yeendaba kwi-Intanethi zivumela wonke umntu ukuba aphawule. Kuthetha ukuba wena okanye ishishini lakho
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Sakhe sanomntu owasixelela ukuba thina, okanye mandithi isicelo sethu sokwakha ifom, besingenguye “onomdla”. Ngandlela thile ndicinga ukuba lo mntu unyanisile. Iifom, ngokwazo azithandeki, kodwa kubantu abazisebenzisayo kwaye baxhomekeke kuzo ukuqokelela idatha, zibalulekile, ukuba azithandeki, zibalulekile. Ke wena, umnini-shishini, umthengisi, njl. Apha
NgoLwesibini, Novemba 10, 2009 NgoMvulo, Oktobha 8, 2012 UChris Lucas
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Kwiveki ephelileyo ndifumene umzekelo omkhulu wendlela engabonakaliyo yokusebenzisa intengiso ye-imeyile njengendlela yokuqhuba ukugcwala kwimithombo yeendaba zentlalo. I-imeyile yavela kwiMpahla yeMidlalo kaDick. Kwakuyimeyile elula, eyilelwe kakuhle eyayinomnxeba olula wokuthatha amanyathelo: Silandele kuTwitter kwaye ufumane ikhowudi yesaphulelo esikhethekileyo: Kutheni kulungile ukuba uDick enze umsebenzi olungileyo wokusebenzisa isixhobo sendabuko, ukuthengisa nge-imeyile, ukuqhuba ukugcwala kwabantu
Lwesine, Okthobha 15, 2009 NgoMvulo, Oktobha 8, 2012 UChris Lucas
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Rhoqo kwaye ndiphinda ndifumana izithuba zithetha ngendlela abantu abangafuni "ukuzibandakanya" neempawu kwimithombo yeendaba zentlalo kwaye uphawu lwakho akufuneki lubekhona, kufanele ukuba lube ngabantu, njl. Njl. evela kuMike Seidle, ibhlog yendawo kunye nomntu oshishino. Ndifuna ukwazisa ukuba andimazi uMike kwaye andinanto nxamnye naye. Ndimlandela ku-Twitter kwaye ndicinga ukuba ngokubanzi unazo
Nguwuphi uMsebenzi uMthengi wakho afuna ukuba uMveliso okanye iNkonzo yakho iwenze?
NgoLwesithathu, Septemba 30, 2009 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UChris Lucas
Ixesha lokuFunda: 2 imizuzu Bendizimase umsitho obumnandi izolo obubizwa nge-Innovation Summit, obubekwe yi-Indy-based TechPoint. UClayton Christensen, isithethi, unjingalwazi kunye nombhali ovela kwiYunivesithi yaseHarvard bathethe ngeDisruptive Innovation kwaye benza umsebenzi obalaseleyo. Elinye lawona manqaku awenzileyo kwinxalenye elandelayo yenkcazo-ntetho yakhe yayikukufumanisa ukuba ngowuphi umsebenzi umthengi afuna imveliso yakho okanye inkonzo eyenzayo. Unike umzekelo wobisi wobisi kunye nendlela, ngokusebenzisa
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Kwindima yam eFormstack, umakhi weefom kwi-Intanethi, omnye wemisebenzi yam kukuphakamisa ubudlelwane phakathi koluntu (i-PR) kwaye ngakumbi ukugubungela imithombo yeendaba, eqhuba ukubhengeza kunye nokuqhuba ukuthengisa. Ukuba namava kokubini kwiarhente nakwicala labathengi ndiyayiqonda into elungileyo enokuyenza ngumbutho wobudlelwane noluntu kumbutho. Nazi izizathu ezithathu, kumava am, kutheni amashishini, kwaye ngakumbi amashishini amancinci, kufuneka aqeshe iarhente ye-PR engaphandle. Awunalo ixesha lokwenza